ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): မြက်ရိုင်းကြားကပန်းတစ်ပွင့်
Posted by LIN LET KYAL SIN at 11:50 AM
သိပ်ကောင်းတယ်ညီမလေးရယ်။ ဆက်ကြိုးစားပါ။ အားပေးလျှက်ရှိပါတယ်။ အစ်ကိုက ကဗျာများများမရေးနိုင်ဘူး။ တခါတလေဘဲ ရေးနိုင်တယ်။ သူများရေးတဲ့ကဗျာတွေကို ပိုကြိုက်တယ်။
wonderful poem . You are suchabrilliant writer. Carry on nyi ma lay.
လင်းလက်ရေ စိတ်ဓါတ်မကျပါနဲ့၊ ကိုယ့်ကို ဝေဖန်သွားတဲ့လူတွေအတွက်ကို သိပ်ပြီးမခံစားပါနဲ့။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေ ကိုယ်လုပ်ပေးနေတာကို က တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးပြုနေတာပါ။ ဆက်လက်ပြီး၊ တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေလုပ်ပေးပါ။ လင်းလက်ရေ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် ကို စိတ်ဝင်တစ်စားနဲ့လုပ်ပေးနေတာကိုက အရမ်းကို လေးစားပါတယ်။